နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၇) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on December 12, 2014 at 11:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း မှာ လမ်းသွားရင်း၊ နေရာတစ်ခုကိုရှာရင်း အသုံးပြုသော အသုံးအနှုန်းများကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ စကားပြောသင်ခန်းစာကို အသံထွက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
Peter : There's the shoe store we've been looking for. It's just across the street.
Gail : Wait! You can't cross the street in the middle of the block! You have to cross at the corner.
Peter : Oh, come on. Let's go across here.
(Sound of car screeching)
Gail : Look out! You nearly got hit by that car! Now do you see why you should cross at the corner?
Peter : I guess you're right. I'll be more careful after this.
There’s the ...
ဒီမှာသုံးတဲ့ there ကို ညွှန်ပြတဲ့ အရာအနေနဲ့ သုံးထားတာတယ်။ ( adverb တစ်ခု အနေနဲ့ပါ introductory function word အနေနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။) ဒါကြောင့် အဲဒီ there အပေါ်မှာ strong stress ထည့်ပြောရတယ်။
Compound noun ဖြစ်တဲ့အတွက် ပဌမစာလုံး shoe အပေါ် primary stress ထည့်ပြောတယ်။ အဲဒီ ပဌမ စာလုံး ကိုလည်း singular (shoe) နှင့်ရေးတယ် (ပုံမှန်အားဖြင့် shoes (plural) ဖြင့်ရေးရတယ်။)
The shoe store we've been looking for.
ဒီလို relative pronoun "that/which" ကို ဖြုတ်ပြီး preposition ကို sentence နောက်ဆုံး ပို့ပြီး ပြောတာဟာ သဘာဝကျတယ်။
The shoe store that we've been looking for. လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ The shoe store for which we've been looking. လို့ပြောရင် grammar မှန်ပေမဲ့လည်း သဘာဝကျတဲ့ conversation မဟုတ်တော့ ကြားရတာ အူကြောင်ကြောင်ကြီးပေါ့နော်။
ဆိုင်ကို တောက်လျှောက် ရှာလာတာ အခုမှဘဲတွေ့တော့တယ် ဆိုတဲ့ perfect progressive (have been + V3) ကို သုံးထားတာ သတိပြုမိတယ်မဟုတ်လား။
Just across the street = directly across the street, exactly across the street.
လမ်းရဲ့ တစ်ဖက်ကမ်း မှာရှိတာကိုပြောတာ။
ဒီမှာသုံးထားတဲ့အသုံးက "Oh, don't be so careful and scrupulous!" "သိပ်လည်းကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့"တို့ " ရဲရဲလုပ်စမ်းပါ"တို့ နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ဒီ come on ဆိုတဲ့ verb က ပုံမှန်အားဖြင့် "မြန်မြန်လာ" " မြန်မြန်လုပ်" စသဖြင့် တိုက်တွန်းပြောဆိုရာမှာသုံးတယ်။ ဒီ two-word verb မှာ stronger stress က adverbial element ဖြစ်တဲ့ 'on' အပေါ်မှာ ကျတယ်နော်။
By the way နှင့် Asamatter of fact အားမှန်ကန်စွာသုံးစွဲနည်း
အဘိဓာန်ကို ဘေးဖယ်ပြီး စာဖတ်ပါ။